Hamamta bocquu foormulaa keetiif ifteessuf qaaqa kana fayyadami. Hamamta bu'uura fi miseensa foormulaa hundaa walitti dhufeenya bu'uura kana wajjiinin safaru fili.
Dhangii - Hagamtaa Bocquu filadhu
Hamamta durtii (12 pt) LibreOffice Math keessa dhaabbatatti jijjiiruuf, jalqaba hamamta qindeessu qabda (fakkeenyaaf, 11 pt) achumaan qabduu Durtii cuqaasi.
Kutaa kana keesstti, hamamta sadhatawaa miseensa gosa hundaaf wabii hamamta bu'uratti murteessu ni dandeessa.
Hamamta barruu foormulaa keessattiif sadhata hamamta bu'uura fili.
Hamamta sadhata kasaalee foormulaa keessa hamamta bu'uura wajjiin gitaawa ta'e fili.
Hamamta sadhata maqoota fi miseensota faankishinii foormulaa keessa kabiroo hamamta bu'uuratti gitaawa ta'e fili.
Hamamta sadhata ogeejjii herreega foormulaa keessa hamamta bu'uuratti gitaawaa ta'e fili.
Hamamta sadhata timijii foormulaa keessa hamamta bu'uuratti gitaawaa ta'e fili.
Jijjiira kee foormulaale haara hundaaf akka durtiitti olka'uuf qabduu kana cuqaasi. Deebin ittisa jijjira kamiyyuu olka'uukeen dura mul'ata.
Title is: Hamamtaa Bocquulee